Ole Ndị Ga-aga Eluigwe​—Ọ̀ Bụ Ndị Ezi Omume Niile? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ole ndị ga-aga eluigwe, gịnịkwa ka ha na-aga ime n’ebe ahụ?
Ọtụtụ ndị chọrọ ịga eluigwe. Jizọs gwara ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi na ha ga-aga eluigwe. Tupu ya anwụọ, o kwere ha nkwa na ya na-aga idoziri ha ebe obibi n’ụlọ Nna ya nke eluigwe.—Gụọ Jọn 14:2.
Gịnị mere a ga-eji si n’ụwa kpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ ka ha gaa dịrị ndụ n’eluigwe? Gịnị ka ha na-aga ime n’ebe ahụ? Jizọs gwara ndịozi ya na ha ga-abụ ndị eze. Ha ga-achị ụwa.—Gụọ Luk 22:28-30; Mkpughe 5:10.
Ọ̀ bụ ndị ezi omume niile ga-aga eluigwe?
N’ọtụtụ obodo, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-abụ ndị ọchịchị. Ebe ọ bụ na ihe mere Jizọs ji akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ n’eluigwe bụ ka ha soro ya chịa ụwa, ihe ọ pụtara bụ na ndị ga-aga eluigwe dị ole na ole. (Luk 12:32) Baịbụl kwuru kpọmkwem mmadụ ole ga-eso Jizọs chịa ụwa.—Gụọ Mkpughe 14:1.
Jizọs edozierela ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya ebe ha ga-ebi n’eluigwe. Ị̀ ma ihe ha ga-eme n’ebe ahụ?
Ma, ọ bụghị naanị ndị ahụ ga-aga eluigwe ka Chineke ga-agọzi. Ọtụtụ ndị na-erubere Chineke isi, bụ́ ndị Alaeze Jizọs ga-achị, ga-adị ndụ n’ụwa ruo mgbe ebighị ebi n’oge a ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. (Jọn 3:16) Ụfọdụ ndị ga-abanye na paradaịs ahụ bụ ndị dị ndụ hụ mgbe a ga-ebibi ndị ajọ omume nọ n’ụwa ugbu a. Ma ndị ọzọ ga-abụ ndị e si n’ọnwụ kpọlite.—Gụọ Abụ Ọma 37:29; John 5:28, 29.
mailto:?body=Ole Ndị Ga-aga Eluigwe, Gịnịkwa Ka Ha Na-aga Ime n’Ebe Ahụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013810%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ole Ndị Ga-aga Eluigwe, Gịnịkwa Ka Ha Na-aga Ime n’Ebe Ahụ?